Cajiib, Gabar Yar oo Swedish ah oo Diiday in la Mustaafuriyo Nin Afgaanistani ah, Sidayse wax u Dhaceen | Biyoguurenews.com
Home Wararka Cajiib, Gabar Yar oo Swedish ah oo Diiday in la Mustaafuriyo Nin...
Cajiib, Gabar Yar oo Swedish ah oo Diiday in la Mustaafuriyo Nin Afgaanistani ah, Sidayse wax u Dhaceen
is hortaag ay gabar u ololaysa xuquuqda dadka oo Swedish ah ku hor istaagtay in dib loo celiyo nin Afgaanistan u dhashay oo qaxooti ah ayaa aad looga soo dhaweeyey baraha bulshada.
“Ilaa iyo inta uu qof taagan yahay duuliyuhu dayaaradda ma duulin karo. Waxa kaliya ee aan samayn karo waa in aan joojiyo dib u celinta, ka dibna waxaan u hogaansamayaa shuruucda” ayey tiri
Kiisaska magangelyo doonka waxaa go’aan ka gaara hay’adda socdaalka”, sidaa waxaa BBC u sheegay Ulf Mossberg oo ah sarkaalka u qaabilsan arrimaha warfaafinta. “Hadday go’aan ku gaaraan in qof dib loo celiyo, waxay qofka ku wareejiyaan booliska xuduudaha, ka dibna boolisku wuxuu na weydiisan karaa gaadiid.
Waxa ka dhacay duullimaadkan wuxuu ahaa in duuliyihii dayaaradda uu go’aansaday in shaqaalaheenna iyo ninka rer Afghanistan aan loo ogolaan inay dayaaradda raacaan” ayuu sii raaciyey.
Previous articleWaa kuma faysal ali waraabe, BBC da oo Mashruuc Kusoo Qaadatay Dabgalka Nolasha+ Siyaasada Gudoomiyaha Xisbiga Uid
Next articleMadaxweynaha Maraykanka ayaa la duubay isaga oo lacag kula gorgortamaya haweenay uu la seexday